Itheyibhile yokuthelekisa phantse kwizikhululo ezingama-50 zizonke-iGeofumadas
NgoSeptemba, 2012 GPS / Izixhobo, Topography
I-GeoInformatics isimangalisile kule nyanga kunye ne-edition apho i-49 ibonisa izitishi ezipheleleyo kwiitheyibhile eziqhelekileyo ezinokuba luncedo kakhulu kulabo bafuna ukwenza isigqibo ngexesha lokuthenga, kunye nokulandelela umzekelo owenziwe ziye zavela kwiminyaka embalwa.
Olunye lwezi zinto zinqabile ngenxa yokungena kwabo okuncinci kwimarike yaseSpain nangenxa yobutsha babo okanye ngenxa yokuba ngaphezulu kwegama elinye litshintshile. Ukusuka kwimbali ukuhlaziywa kweminyaka eyi-4 edlulileyo ibonakala iLeica apho igama leFlexline lisinda kwaye ummeleli waseYurophu apho ivela khona, i-Nikon ne-SPECTRA ibonakala nangona ngoku propmble Kwitheyibhile yangaphambili akubonakali nezixhobo zabo. Abo banganyangekiyo kukudityaniswa, iTopcon kunye neSokkia (IPropathi yeTopcon) yemvelaphi yaseAsia, ethi yona ibe nokungena okuninzi kwimakethi yaseLatin American. I-FOIF kunye ne-PENTAX zibambelela kwi-nomenclature apho ngokongeza.
Kwaye abo abangekho etafileni: CST / Berger, INZONYANA ebonakala ngoku kakhulu kufuphi neKOLIDA.
Emva koko sibhala izixhobo ezicatshangelwayo kunye nomnyaka wokungeniswa, nangona sikhuthaza ukuba ugcine umshicilelo we-pdf kuba kukuqokelelwa.
I-OTS 810 Win Win TS TS (2009)
I-OTS 680 Ultra (2011)
I-OTS 680 Power (2008)
I-OTS 650 Basic (2010)
I-HTS 582AGX (2007)
I-KTS 440L (2006)
I-KTS 440R (2008)
I-KTS 440RC / LRC (i-2010)
I-KTS 470RC / LRC (i-2011)
I-Flexline TS06 kunye (2012)
I-Flexline TS09 kunye (2012)
I-CX Series (2012)
I-FX Series (2012)
I-NET AX Series (2011)
ISX Series (2012)
IS Series Series (2012)
I-MS-AX Series (2011)
I-PS Series (2012)
Ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi, akukho nto ilunge ngakumbi kunokuhlala phantsi kunye nomthengisi wendawo kwaye umamele ngomonde umbongo. Emva koko thatha isigqibo ngokuxhomekeke kwinto esihlala kuyo, hayi esekwe kwinto abasinika yona.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-AutoCAD Course Course, efumanekayo yokukhuphela
Post Next Uyenza njani uyilo ngeGeomapOkulandelayo »
2 Iimpendulo "Itheyibhile yokuthelekisa phantse zonke izitishi ezingama-50"
Ndifake isicelo sakho kummeli waseGeo Allen ohambisa izixhobo ePeru.
Mxelele ukuba akunike i-Z! Iikhuphulelo zokukhupha kunye nekhowudi ye-Geofumadas_CT, kwaye iyafaneleka.
Julayi, iPsopopio uthi:
Ndifuna ukwazi ukuba ngaba banomhambisi ePeru, kwaye litheni ixabiso elixabiso eliphakathi kwiDola zaseMelika yezixhobo ze-Submetric GPS zetogragi, ye-Geo Allen brand.